ကျော်လေးဆူဝင် ရွှေစာရံ ဘုရား ပွဲတော်ဆီသို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျော်လေးဆူဝင် ရွှေစာရံ ဘုရား ပွဲတော်ဆီသို့
ကျော်လေးဆူဝင် ရွှေစာရံ ဘုရား ပွဲတော်ဆီသို့
Posted by Diamond Key on Mar 12, 2012 in Copy/Paste, Local Guides, Travel | 26 comments
စိန်သော့ရဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်း စိန်သော့ ရဲ့ ရိုက်ချက်
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တပေါင်းလပြည့်နေ့ကနေ လပြည့်ကျော် ၉ ရက်နေ့ထိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထင်ရှား ကျော်ကြားတဲ့ ဘုရားစေတီတော်များမှာ တစ်ဆူအဖြစ်အပါအဝင် ဖြစ်ကာ ကင်းဝန်မင်းကြီးရဲ့ စခန်းစဉ်လင်္ဏာမှာ “အရှေ့မှာရွှေစာရံ၊ ပုဂံ အနောက်၊ တောင်မြောက်ယင်မြော၊ သီဟတော” လို့ဖေါ်ပြထားခဲ့တဲ့ ကျော်လေးဆူ (ရွှေစာရံ၊ ရွှေစည်းခုံ၊ ရွှေယင်မျှော်၊ အညာသီဟတော) စာရင်းဝင် မန္တလေးတိုင်း၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်က သမိုင်းဝင် သစ္စာဓိဌာန် ရွှေစာရံ စေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ ဘုရားပွဲတော်ကြီးကို ချိန့်ချိန့်သဲသဲ စည်ကားစွာနဲ့ ကျင်းပပြုလုပ်ပါတယ်။
ရွှေစာရံ စေတီတော်မြတ်ကြီးကို သွားရောက်ဖုးမြှော်မယ်ဆိုရင် မန္တလေးကနေ မန္တလေး – ပြင်ဦးလွင် နှင့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းသို့ သွားရာ ကားလမ်းမကြီးအတိုင်း ၁၃ မိုင်ရှိ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ အုန်းချောကျေးရွာဆီ၊ ထိုမှတစ်ဆင့် အုန်းချောလမ်းခွဲမှ ၃ မိုင် ၂ ဖာလုံ တောင်ဖက်လမ်းခွဲ အတိုင်းဝင်ရောက်ကာ ဖူးမြှော်ရပါတယ်။
ဒီဘုရားပွဲတော်ဟာ အထက်အညာဒေသက စည်ကားတဲ့ ဘုရားပွဲတွေထဲမှာ တစ်ခု အပါအဝင်မို့ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေ ဆီကနေ ပွဲတော်လာသူတွေနဲ့ အထူးစည်ကားပါတယ်။ အညာဒေသထွက်ကုန်တွေနဲ့ ရှမ်းပြည်ဒေသက ထွက်ကုန်တွေ အစုံရတဲ့ ပွဲတော် တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘုရားပွဲဈေးမှာ ရှမ်းဈေးတန်း ဆိုပြီး ရှမ်းပြည်ဒေသက ထွက်ကုန်တွေအတွက် အထူးနေရာပေးတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော် ဒီ သမိုင်းဝင် သစ္စာဓိဌာန် ရွှေစာရံ စေတီတော်မြတ်ကြီးကို တည်ထားကိုးကွယ် ပူဇော်ခဲ့တဲ့ ဘုရားဒါယိကာမကြီးက မိုင်းမောဝ်ဧကရီ လှဒေဝီ စောမွန်လှ (ရှမ်းအခေါ်) စဝ်မွမ်းလ မို့ ရှမ်းမျိုးနွယ်တွေရဲ့ ဘုရားပွဲတော် တစ်ခုလည်း ဖြစ်လို့ပါ။
သမိုင်းမှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၉၀၀ ကျော်က အနော်ရထာ ဘုရင်မင်းမြတ် ရှမ်းပြည်အရောက်မှာ ရှမ်းပြည်အရှင်က နှစ်ပြည်ထောင် နောင်အရှည် ချစ်ကြည်မြဲဖို့အရေး မိုင်းမောဝ်ဧကရီ လှဒေဝီ စောမွန်လှ (ရှမ်းအခေါ်) စဝ်မွမ်းလ ကို ဆက်သခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စဝ်က – အရှင်၊ မွမ်းက – ဂုဏ် နဲ့ လ ( လီ) ဆိုတာက – အလှကြွယ်သူ၊ “အလှဂုဏ်ကြွယ်ကာ တင့်တင်သူ” ဆိုတဲ့ ဘာသာတရား အလွန်အလေးထားတဲ့ ရှမ်းမင်းသမီးလေးကို အနော်ရထာက မိဘုရားအရာထားကာ အလေးထားမြှောက်စားလေတော့ ဘာသာတရား အလွန်အလေးထားတဲ့ မိဘုရားစောမွန်လ ဟာ ဘာသာသာသနာတော် ထွန်းတောက်စေဖို့ အလွန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာမို့ နားတောင်းတော်မှာ မွေတော်ဓါတ် ကိန်းဝတ်ကာ လွန်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။
လောကသဘာဝမှာက အောင်မြင်သူ၊ ကျော်ကြားသူတွေမှာ မလိုသူတွေဆိုတာ ရှိလာတတ်ပြီး သစ်ပင်တစ်ပင် ထိပ်ပိုင်းခွင်ဝယ် ဝေဟင်လေမိုက် ပိုလို့တိုက်တာမို့ လောကဓံကို ရှေးကံအရ ခံရခဲ့ကာ၊ တစ်ဖက်မှာလည်း ဘာသာသာသနာ အတွက် ရွှေစာရံစေတီတော်ကြီး တည်ထား ကိုးကွယ်နိုင်စေဖို့ အကြောင်းဖန်လာတော့ ပုဂံမြေကနေခွာကာ ရှမ်းပြည်ဆီ ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။
ပုဂံကနေ ရှမ်းပြည်ဆီ အပြန်လမ်း၊ ခုစေတီတော်အနီးက ပန်းချောင်း (ယခု နားဋောင်းကျချောင်း) အရောက်မှာ မွေတော်ဓါတ်ကိန်းဝတ်တဲ့ နားဋောင်းက ချောင်းထဲကျခဲ့ကာ နားဋောင်းက မွေတော် ပြာဋိဟာ ပြပြီး ကောင်းကင်ယံမှာ စာသူငယ်အပေါင်းက သောသောညံအောင် ဝိုင်းရံပူဇော် ခဲ့တာမို့ အဓိဌာန်ကာ ပြန်ရရှိခဲ့တဲ့ မွေတော်ဓါတ်ကိန်းဝတ်တဲ့ နားဋောင်းကို ဌာပနာကာ တည်ထားတဲ့ စေတီကို ရွှေစာရံစေတီရယ်လို့ သမိုင်းတွင်ခဲ့တာပါ။
တည်စကတော့ အဘယခေမာ ကုန်းသာယာမှာ လှိုဏ်ဂူဝ ထားကာ ဥာဏ်တော် ၅ တောင်နဲ့ တည်ထားပူဇော်ခဲ့ကာ ပုဂံ၊ မြင်စိုင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ ပင်းယ၊ ရတနာပူရ၊ ရတနာပုံ အထိ မင်းအဆက်ဆက် နဲ့ ရသေ့ကြီးဦးခန္တီ အထိ အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် ပြုပြင်မွန်းမံခဲ့လို့ လက်ရှိစေတီတော်ကြီးကို နောင်လာနောက်သားများ ဖူးမြော်ခွင့်ရတာပါ။
ဘုရားဖူးလာသူတွေအနေနဲ့ စေတီတော်ကြီးတစ်ဝိုက်မှာ တောင်ဖက်မှာဆို သီရိဓမ္မာသောက မင်းကြီးကောင်းမှုတော် ရွှေမုဌောစေတီ၊ အနီးအနားက ၁၇ ရာစုလက်ရာ ဖိုးပွား၊ ဖိုးကလား၊ ဖိုးပေါ်ဘုရားများကို ဖူးမြော်နိုင်ပြီး ဘုရားမှာ ရှိတဲ့ ဟော်နန်းဆောင်မှာ ရှမ်းရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်း ရှမ်းအိုးစည်ဝိုင်းနဲ့ ဂါရဝပြု ပူဇော်နိုင်ကြပါတယ်။
ရှေးတုန်းက ဘုရားပွဲတော်ရက်တွေမှာ ငါးထွေ၊ ငါးရွှေး အစရှိတဲ့ ငါးကြီးတွေ ဒုဌဝတီမြစ်အတိုင်း ဆံတက် ရောက်ရှိကာ ဘုရားတည်ရာ ကမ်းမှာပေါ်နေတတ်လို့ ဘုရားဖူးတွေက ငါးစာကျွေးတာ၊ ငါးကြီးတွေခေါင်းကို ရွှေချတာလုပ်တဲ့ “ငါးကြီးဆိပ်” လို့ခေါ်တဲ့ ရေဆိပ်မှာ အခုတော့ လှေ၊သမ္ပာန်လေးတွေနဲ့ အနီးအနားကို အပျော်စီးလို့ရပါတယ်။
ပွဲတော်ဆီကို မြင်းလှည်းလေးတွေနဲ့ လည်းလာကြတယ်။
ပွဲတော်အတွင်းက ဓါတ်ပုံတွေ အမြန်ရတဲ့ Mobile Lightroom နေရာလေးပါ။ ခေတ်မှီဓါတ်ပုံတွေ ကူးနေတာလေ။
ပြောပြစရာလေး တစ်ခုရှိတာက ဘုရားမှာ ဂေါပကအဖွဲ့က နတ်ကတော်အချို့နဲ့ စီးပွားရေးအကွက်ထွင် လုပ်စားသူတွေရဲ့ ပယောဂကြောင့် ဖြူစင်မြင်မြတ်တဲ့ ပါရမီရှင် ဘုရားဒါယိကာမကြီး စောမွန်လှကို သိုက်နန်းရှင်၊ ဂူနန်းရှင် စတဲ့ အနိမ့်စားပရလောကသားအဖြစ် လူပိန်းကြိုက် လုပ်ကြံဖန်တီးကာ ရိုးသား အယုံလွယ်သူတွေအပေါ် လုပ်စားနေကြတာတွေ လိုက်လံတားမြစ်နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရှမ်းပြည်က ဘာသာရေးကို နားလည်တဲ့ ပညာတတ် အသိုင်းအဝိုင်းတွေ၊ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကလည်း ပါရမီရှင် ဘုရားဒါယိကာမကြီး အဖြစ်သာ သမိုင်းဝင်စေလိုကြပါတယ်။
ဘုရားဒါယိကာမ စောမွန်လှဆီမှာ အဓိဌာန် ဆုတောင်းကြသူတွေ
ကျော်လေးဆူဝင် ရွှေစာရံ ဘုရား ပွဲတော်ကြီးကတော့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တပေါင်းလပြည့်နေ့ကနေ လပြည့်ကျော် ၉ ရက်နေ့ထိ အထက်အညာမှာ ပွဲတော်လာသူ ဘုရားဖူးတွေနဲ့ အမြဲစည်ကားလျှက်ရှိပါတယ်။ မရောက်ဖူးသေးရင်တော့ အခွင့်ကြုံရင် ဝင်ရောက်ဖူးမြော်ဖို့ တင်ပြဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။
(အချက်အလက်များကို သီပေါကိုလတ် ရေးသားပူဇော်ကာ ရွှေစာရံ ဂေါပက အဖွဲ့က စီစဉ်ထုတ်ဝေသည့် ဘုရားသမိုင်းစာအုပ်မှ ရယူပါသည်။)
မအိရေ၊ ရွှေစာရံပြန်လက်ဆောင်ငါးလေးတွေကို ရွှာလုံးကျွတ်ဝေချင်တာ အခွင့်မကြုံလို့ ပုံလေးပဲ တင်ပြီးဝေတာနော် …….
သိုက်နန်းရှင်.ဂူနန်းရှင် ဆိုတာကိုမဖြစ်စေချင်ရင် အောက်ဆုံးပုံက ဒီဇိုင်းတွေကို အရင်ဖယ်ရှားမှရမယ်ထင်တယ်.
ကိုယ့်လူမျိုးကလည်း အစွဲကခပ်ကြီးကြီးဆိုတော့ အခက်သား…
မန်းမရွေးတွေကတော့.. ရှလွတ် ချင်စရာဗျာ…
အမတ်မင်းရေ၊ အဲဒီပုံတွေက ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီက နောင်လာနောက်သားတွေ ဘုရားဒါယိကာမကို မြင်ဖူးသာဓုခေါ်စေဖို့ ရုပ်ထု ထုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ခေါင်းတော်က ဘောင်းတော်မှာ ပိုက်ပိုက်တွေ ကတော့ထိုးလို့ဗျာ။
ကန်တော့ပွဲရောင်းနေသူတွေက “အမေ အမတော် စောမွန်လှ မပါ” လုပ်နေတော့ တောင်းဆုပြည့်လိုသူတွေက ဘုရားဖက်မှာ ကန်တော့ပွဲ မများပဲ ဖြစ်နေသဗျို့။
စောမွန်လှ ဆိုတာ အနော်ရထာ ကတော် နားတောင်း ပြုတ်ကျ သွားလို့ နားတောင်းကျချောင်း ဖြစ်ပြီး ဌာနေပြန်ရတာ မဟုတ်လား။
ဆူးရေ၊ အများပြောတဲ့ သမိုင်းမှာတော့ မွေတော်ကိန်းတဲ့ နားဋောင်းကြောင့် ဘုရင်ကို မလိုသူတွေက တစ်မျိုးပြောကြလို့ ဘု၇င်က အဟုတ်ထင်ပြီး ပြည်တော်ပြန်စေတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲဒီမှာ လမ်းခရီးမောတာနဲ့ ပါလာတဲ့ အဝတ်ကို သတိလွတ်ပြီးခေါင်းပေါ်တင်လိုက်တာ မွေတော်ကိန်းတဲ့ နားဋောင်းမို့ ချောင်းရေထဲ ပြုတ်ကျခဲ့တယ်။ ဒီနားဋောင်းပြုတ်ကျတဲ့ ချောင်းဖြစ်တဲ့ ပန်းချောင်း ကို ခု နားဋောင်းကျချောင်းလို့ ခေါ်ကြတယ်။
ဒါနဲ့ အဓိဌာန်နဲ့ ပြန်ဆုတောင်းပြီး ပြန်ရမှ ဌာပနာပြီး စေတီတည်ခဲ့တာမို့ သစ္စာဓိဌာန် ရွှေစာရံ ဆိုပြီး ဆုတောင်းပြည့်တယ်ဆိုပါတယ်။
ဇတ်လမ်းလေး ဘာလေး လုပ်ပါအုန်း..
ကြားဖူးနားဝ တစွန်းတစ ဆိုတော့ သေချာ မသိဘူး.. သိရင် ပိုစ်လေး ဘာလေး တင်ပြီး ရေးပေးပါလား.. မြန်မာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာ ရာဇ၀င် ထဲက သမိုင်းတချို့ သိထားဖို့လည်း လိုတယ်။
မ အ ရလေအောင်ပေါ့။
ရွှေစာရံကို မရောက်ဖူးသေးဘူး .. နောက်တစ်ခါ မန်းလေးသွားရင်အဲဒီမှာ လှေသွားစီးမယ် …
မနေ့ကတောင် အဘပေါက်ကို သမီးက မန္တလေးတဝိုက် နေကျေ လုပ်နေတဲ့ သူက မရောက်ဘူးသေးဆိုတော့ သိပ်မယုံချင်ဘူးလေ ………
မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာကို မြင်ရလို့ ကျေးကျေး ပါ ဗျို့  …။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် .. မျှော်နေတယ်နော့ ….
ြ့ပင်နေတယ် လုလင်ရေ၊ သိပ်ကို လာချင်နေတာနော် …
ကျနော်ကတော့ရွှေစာရံကို ဘုရားပွဲမဟုတ်တဲ့အချိန်မှ သွားတယ်။
ရှမ်းရိုးမ က အိုးစည်သံ ဗေဗေထုံလို့ညံ ……….ဆိုပြီး နတ်ချော့တဲ့အထဲ ၀င်မကခဲ့ဘူးလား။
ဟော အခုမှ သတိရတယ် ဖရဲမနဲ့ကျနော့်ကို ဘာလို့ရွှေစာရံမခေါ်တာလဲ။
အယ် …. ဒီဘဘကြီး ကတော့ လုပ်တော့မယ်။ ရှမ်းရိုးမ က အိုးစည်သံ ဗေဗေထုံလို့ညံ ……….ဆိုပြီး နတ်ချော့တဲ့အထဲ ၀င်မကခဲ့ဘူးလားလုပ်နေတယ်။ ဂေါပက ကပြောနေတယ်လေ။ ဘုရားမှာ ရှိတဲ့ ဟော်နန်းဆောင်က ရှမ်းရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်း ရှမ်းအိုးစည်ဝိုင်းနဲ့ ဂါရဝပြု ပူဇော်နိုင်ဖို့ပါ။ နတ်ချော့ဖို့ ဟုတ်ဖူးတဲ့။
နောက်ပြီး ဘယ်မာမီနဲ့ မှမဟုတ်ဘူး။ အရီးတွေပဲ ဘုရားပွဲမှာ တွေ့ခဲ့တယ်။
အိမ်တော့ သွားမဖွမှာနော်…………………… အိပ်ပြောင်းထားတာ ရက်ပိုင်းရှိသေးလို့ ဖွစရာမလိုပဲ ပစ္စည်းတွေက ပွနေတာဗျ … မနဲ ရှင်းနေရလို့ ရွာထဲတောင် ဒီရက်ပိုင်းမရောက်တာနော် …………
ရွှေယင်မျှော် ဘုရားပွဲကလည်း တပေါင်းလပဲဗျ….။ မှတ်မိတာကတော့ ထန်းရည်ကို ရေစည်လှည်းနဲ့ တိုက်ပြီးရောင်းတာပဲ………..
ဟုတ်ဘူးတဲ့တွေ.လားလေးပေါက် လူတွဲပြန်တာမဟုတ်ဘူး ကားငှားပြန်တာတဲ့ ဟဟဟဟဟဟဟ
လူဂျိုး …. ဘယ်က ကားငှားပြန်ရမှာလဲ …….. ပွဲထဲမှာ တွေ့တဲ့ မိန်းမချောလေးတွေက ဓါတ်ပုံရိုက်နေတုန်းတွေ့သွားတာ…ကိုရီးယားမင်းသား မြန်မာပြည်ရောက်နေတုန်း
လျှောက်လည်တယ် ထင်ပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံတွေ တွဲရိုက်ကြလို့ …. ခေါင်းမူးသွားတာကို … ပွဲလာတဲ့ ဟို မော်ဒယ်လေးက တွေ့သွားပြီး သူ့ကားနဲ့ အတင်း တင်သွားလို့ လိုက်သွားရတာပါ .. ကိုကိုတိုက်ရယ် …
….. အသက်မကြီးသေးပါမောင်ရယ် x ထန်းရွက်ပုတီးကလေးဆွဲလို့ x ရွှေစာရံကို အရောက်သွားလို့လည် …..
ဆြာသော့ရေ… ထန်းရွက်ပုတီးလေးတွေကော မဆွဲကြတော့ဘူးလား…?
ဆွဲကြပါတယ်…. ငါးပုံလေး ဘေးမှာတောင် ပါသေးတယ်လေ။ချစ်စရာ ဓလေ့လေးတွေတော့ မပျောက်သေးပါဘူး
မန်းလေးမှာ ရိုးရာပွဲတော်လေးတွေ ရှိနေသေးတယ် တကယ်လဲပျော်စရာကောင်းတယ်..
အဲဒါကြောင့် မန်းလေးမှာ နေရတာကောင်းတာပေါ့…
ရွှေစာရံဘုရားကို သတိရလိုက်တာ ဦးဦးစိန်သော့ရယ်… မနောတို့သွားတုန်းက ကျောင်းတက်စဉ်ကာလကလေ.. ဓာတ်ပုံအရိုက်ကောင်းလို့ ခရီးသွားကားနဲ့သွားတာ ကားက ပြန်ထွက်သွားတာတောင်မသိလိုက်ဘူး။ မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။ နောက်မှ ကားပေါ်မှာ နောက်ကို လူလာစစ်မှ မပါလာတာ သိကြတော့ ကားပြန်ကွေ့မှ ခရီးဆက်လို့ရခဲ့တာ။ ခုတော့ လွမ်းတယ် အဲဒီတုန်းက အချိန်တွေရယ် ရွှေစာရံဘုရားရယ်…. သူငယ်ချင်းတွေရယ်…
ဦးစိန်သော့ကြီးရေ … ဘုရားပွဲတွေကို … တစ်ခါမှတော့မရောက်ဖူး … ။ ရန်ကုန်က ပွဲဈေးတွေတောင် ကြားဖူးနားဝတွေကြားပြီး .. သွားရမှာ လန့်နေတာ ..ချွေးတွေနဲ့ ကပ်စီးနေတဲ့လူတွေကြားခေါင်းမူးလောက်အောင် မတိုးဝှေ့ ချင်တာရယ် … လက်သရမ်းတတ်တဲ့ လူတွေနဲ့ တွေ့မှာလည်းကြောက်တာရယ်ကြောင့်လေ … ။
ငှက်သမ္ဗာန် စီးဖို့ စောင့်နေတဲ့ လူတွေလည်း .. မနည်းဘူးပဲ … ။ ကမ်းပါးကတော့ .. မြေပျော့နော် … မဆီမဆိုင် … ကမ်းပါးရေတိုက်စားမှုကိုစိတ်ပူမိတယ် … ။ မိုးတွင်းဆိုလျှင်တော့… သွားရတာ ..စိုစိစိဖြစ်နေမယ်ထင်တယ် … ။
အညာဒေသထွက်ကုန်တွေကတော့ .. အညာပြန်လက်ဆောင်အနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ နာမည်ကြီးပါတယ် …. ။ ဒါပေမယ့် ဦးလေးရေ … ခေတ်အဆက်ဆက် .. အဲ့ဒီလို ဟာလာဟင်းလင်းကြီးရောင်းနေတာတော့ သဘာဝ မကျဘူးပဲ … ။ ယင်နဲ့.. လမ်းက ဖုန်မှုန့်တွေ .. ပွဲလာသူတို့ လက်နဲ့ တို့ထိမှုတွေကြောင့် … နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေ ..ခံစား ရနိုင်ပါတယ် …သူတို့ ရောင်းကုန် မြင်ရအောင် .. ဖွင့်ပြထားတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ …. သန့်ရှင်းမှုလေးပါ .. အားဖြည့်ပေးလိုက်လျှင် … အတော်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ် … ။
လက်မှုထွန်းကားလျှက်နဲ့ .. နာမည် ကြီးသင့်သလောက် မကြီးတာ .. နာသဗျို့  … ။
youtube တို့ Metacafe တို့မှာ … အရုပ်ခေါက်တာမျိုးတင်သင့်တယ် … ။နိုင်ငံခြားကတော့.. စာရွက်ခေါက်တာတွေ ..တင်တာပဲ … ။ ဒီမှာကတော့ … သူများအတုခိုးမှာ စိုးတာနဲ့ .. ဆရာစားချန်တာများပြီး .. နောက်ပိုင်းတော် ဒီလို .. လက်မှုပညာ တွေ တိမ်ကောသွားမလား ရင်မောမိတယ် …
ဓါတ်ပုံတွေ ပြပြီး .. . ဘုရားပွဲခေါ်သွားတာ ကျေးဇူးပါဦးလေးရေ … ။
ကွန်းမန့်ရေးတာ အရမ်းကို နောက်ကျနေခဲ့တာ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။
အခုမှ မဖတ်လိုက်ရသေးတာတွေ ပြန်ရှာပြီး လိုက်ဖတ်နေတာပါ။
ဒီတစ်ခါ မန္တလေးရောက်ရင် လိုက်ပို့ဗျာ။
ပရိသတ်တစ်ယောက် ၀င်ကြည့်တဲ့ ပုံစံထက်
သင်တန်းသားတစ်ယောက် ၀င်ကြည့်ပြီး သင်ယူတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့